Jesosy Mamonjy : Rakitra ny adin’ny samy mpivavaka omaly teny Ankorondrano – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2021 → février → 8 → Jesosy Mamonjy : Rakitra ny adin’ny samy mpivavaka omaly teny Ankorondrano
Redaction Midi Madagasikara 8 février 2021 5 Commentaires
CHEL 9 février 2021 at 14 h 49 min · Edit
Ary i Jesosy angaha tsy tonga tao Namonjy an’ny zareo ry ‘reto ?
RAZAFIMAHNDRY Lova 9 février 2021 at 8 h 47 min · Edit
Diso be mitsy ny zavatra lazain’ity gazety ity, fifidianana izay ho mpikambana mandrafitra ny Biraon’ny firaisan’ny Mpitandrina (BCP) tompoko no natao fa tsy filakevim-pitantanana.Noho izany miangavy anareo mba hanitsy ny zavatra soratanareo ato sy hanao fialan-tsiny.
RANDRIA 8 février 2021 at 19 h 30 min · Edit
Efa tena tandra vadi-koditra @ isika GASY mihitsy izany ity FANGALARAM-BATO ity atrany ampiangonana avy ara misy . Raha mbola teo i DAOUDA dia nisitrika tao anaty TSIKAFONA…..marina e !!!!
Bangakely 8 février 2021 at 15 h 09 min · Edit
Oadray ,???? Ingahinaivo mihintsy no mpitari tolona koa lazainareo fa tsy tao izy ,
Ignace Rakoto 8 février 2021 at 13 h 49 min · Edit
Hita zany fa tsy tao Dadanaivo, hafa ihany Dadanaivo e………